Vidio: Okwu Media | Martech Zone
Vidio: Okwu Media
Sọnde, Febụwarị 24, 2013 Douglas Karr
N'abalị ikpeazụ m gara Ememe Nkiri Franklin, a na-eme emume a na-eme kwa afọ na-eme vidiyo ndị a na-ede ede, na-eme na ụmụ akwụkwọ Franklin Indiana High School mepụtara. Obere vidiyo niile dị egwu ma bụrụ onye akpọrọ aha ya Okwu Media nke Austin Schmidt na Sam Meyer dere.
Ihe nkiri a lekwasịrị anya na usoro akụkọ wee tulee telivishọn mpaghara, akwụkwọ akụkọ na redio na otu ha ga-esi gbanwee maka ngwa ngwa maka ọdịnaya site na ntanetị na mgbasa ozi mmekọrịta. Ọ bụ ezie na ọchịchọ a na-achọsi ike maka ọdịnaya na ndị na-ege ntị kesara gafee ndị na-ajụ ase, akụkọ a bụ, n'ụzọ doro anya, nnukwu ihe atụ nke ihe dị mkpa na isi ihe maka ezigbo akwụkwọ akụkọ. Blọọgụ na mgbasa ozi mmekọrịta bụ ụzọ dị mkpa maka ijikọ na ibipụta ngwa ngwa, ma a naghị emecha ọdịnaya ahụ ma debe ya ede dịka akụkọ nke ezigbo odeakụkọ dere.
Akwa ọmụma mgbe niile ga-eri nke ọma. Ndi oru nta akuko ekwesighi isoro mpi 24/7 na agha, ha kwesiri inye omimi ka anyi ghota. Echere m na ọ bụ ihe furu efu n'ọgụ maka eyeballs na ọ bụ kpọmkwem ihe mere ndị na-agụ akwụkwọ na ndị na-ele anya na-esi na mgbasa ozi ọdịnala. Ọ bụghị na ozi ọma dị mma na ntanetị, ọ bụ na akụkọ anaghị akọ akụkọ nke ọma. Enwere m olile anya na Austin na Sam mụtara nke a ka ha na-ede ma mepụta nnukwu akụkọ nke ha.
Echere m na nke ahụ bụ ihe ndị ahịa na-amụ banyere ya na-enye anụ ọhịa ahụ nri nakwa. Ide ederede maka ide ederede na-eme ka ndị na-ege gị ntị ghara ilekwasị anya ma ghara inye ha ozi zuru oke ha na-achọ. Dee ederede, kesaa ọtụtụ mgbe, ma nwee ọdịnaya dị ịrịba ama.
Tags: austin schmidtmee ntugharifranklin ihe nkiri ememmeihe gbasara mgbasa ozisam meyer
Ejiri kọfị kọwaa Social Media
Formstack: Tinye Formdị na Dropbox